Ulawulo lweNethiwekhi: Ukuqala nokumisa iSamba
Emva kokugqiba ufakelo nangaphambi kokuba usebenzise iSamba, kuya kufuneka uqale iidemem zayo ezimbini, smbd kwaye nmbd . Zombini zinokuqaliswa ngaxeshanye ngokuqala inkonzo ye-SMB. Ukusuka kwigobolondo yomyalelo, sebenzisa lo myalelo:
Nanini na xa usenza utshintsho lotshintsho, njengokongeza isabelo esitsha okanye ukwenza umsebenzisi omtsha weSamba, kuya kufuneka uyeke kwaye uqalise inkonzo kwakhona ngale miyalelo:
Ukuba ukhetha, unokuma kwaye uqalise inkonzo ngemiyalelo eyahlukeneyo:
iziphumo ebezingalindelekanga ze-orthotricyclin
Ukuba awuqinisekanga ukuba iSamba iyasebenza, ngenisa lo myalelo:
Ufumana umyalezo obonisa ukuba ngaba smbd kwaye nmbd iidemoni ziyasebenza.
Ukuqwalasela iSamba ukuqala ngokuzenzekelayo xa uqala i-Linux, sebenzisa lo myalelo:
Ukuqinisekisa ukuba chkconfig Umyalelo usebenze ngokuchanekileyo, ngenisa lo myalelo:
Kuya kufuneka ubone imveliso efana nale ilandelayo:
Ungaqwalasela ngokuzimeleyo iinkonzo ukuqala ngokuzenzekelayo kwisithandathu ngasinye Amanqanaba okuqala yeLinux. Inqanaba lesi-3 le-Boot yinto eqhelekileyo ngaphandle kweseva ye-X; Inqanaba lesi-5 kukusebenza kwesiqhelo nge-X server. Ukuseta i-SMB ukuqala kumanqanaba 3 no-5 kwenza ukuba i-SMB ifumaneke- nokuba uyayisebenzisa imbonakalo yomsebenzisi.
i-metamucil ilungile kuwe
Ungaqala kwaye umise iSamba ngokusebenzisa isixhobo soqwalaselo lweNkonzo, eboniswe kulomfanekiso ulandelayo .. Skrolela ezantsi kuluhlu lweenkonzo de ufumane inkonzo ye SMB. Ungasebenzisa amaqhosha amathathu kwibar yesixhobo ngaphezulu kwefestile ukuqala, ukumisa, okanye ukuqala inkonzo kwakhona.
Ungasebenzisa isixhobo soqwalaselo lweNkonzo ukuqala i-Samba ngokuzenzekelayo, nangona inyani chkconfig Umyalelo kulula ukuwusebenzisa. Ukuqwalasela iSamba ukuba iqale ngokuzenzekelayo kumanqanaba 3 no-5, landela la manyathelo:
Khetha i-SMB kuluhlu lweenkonzo.
Cofa i Yenza iqhosha.
Oku kuzisa ibhokisi yencoko yababini edwelise amanqanaba amahlanu okubaleka.
Qiniseka ukuba zonke iibhokisi zokukhangela ezintlanu zikhethiwe.
indlela yokubuyisela umva umva
isetyenziselwa ntoni i-skelaxin
idosi eqhelekileyo ye-levothyroxine
iidosi zedlala lengqula
uyifumana njani i-bmi yakho
ketorolac, yenzelwe ntoni?